Maitiro ekurera katsi pamhepo | Noti Katsi
Maitiro ekurera katsi pamhepo
Imwe nzira yekuwana furry iwe yauri kutsvaga kushandisa chishandiso chakakura uye chinobatsira seInternet. Mazuva ano ruzhinji rwevadziviriri vemhuka vane yavo peji rewebhu kana yavo yega maficha mune mamwe masocial network (kana mune akati wandei) mavanorongedza mifananidzo yeimbwa uye / kana katsi dzavainadzo panguva ino. Asi havazi ivo vega: vanhu vanoisa zvakare kushambadzira umo ivo vanoratidza avo vane furry avo vanopa.
Zvisinei, kutora katsi pamhepo harisi basa riri nyore. Kune vanhu vazhinji vanozoedza kukunyengedza, saka muNoti Gatos tiri kuenda kukuudza nzira yekunzvenga kuve nematambudziko aya kuti ugone kuwana katsi yauri kutsvaga.
1 Tora katsi yako muShelter
2 Maitiro ekudzivirira kunyengedzwa nevanhu
Tora katsi yako muShelter
Nzira yakanakisa yekudzivisa kubiridzirwa ndeye kutora katsi zvakananga kuMudziviriri, asi kwete chero munhu. Hazvikurudzirwi kutora katsi yekutanga yaunoona yaunoda pasina kuona zvimwe, sezvo zvingaitika kuti unofarira imwe kati zvakanyanya. Uye kunyangwe zvakadaro, hauzomboziva zvechokwadi kana iriyo chaiyo mhuka yaunoda kusvikira waenda kunozviona iwe pachako, saka zviri nyore kuti utange waona mafoto emhuka dzavanadzo kuti dzitorere kuburikidza newebhusaiti kana chimiro, uyezve kana paine imwe kana yakawanda yaunoda, enda unovaona.
Maitiro ekudzivirira kunyengedzwa nevanhu
Kazhinji zvinowanzoitika kuti munhu ane marara e kitsi aanotsvaga imba. Asi unofanira kungwarira. Pane zvinhu zvakati wandei zvatinofanirwa kutarisa tisati tamuona, uye ndeizvi:
Mutauro: Zviri nyore kuwana shambadziro yakanyorwa, sezviri pachena, mune mumwe mutauro. Asi chete sezviri pachena. Kune vanhu vazhinji vanonyora zvinyorwa mumutauro wavo vobva vashandisa muturikiri wepamhepo. Iwe unofanirwa kuziva kuti vashanduri ava havana kunyatsoita, saka kana kana uchiverenga zvinyorwa zveshambadziro ukacherekedza chimwe chinhu chinoshamisa, iwe zvirinani uve unofungira.
Nyaya dzekupinda: kushambadzira kwese kunofanirwa kusanganisira kana imwe chete nhamba yefoni kuti ugone kubata mushambadzi.
Mifananidzo: mushambadzi anofanira kunge akaisanganisira mapikicha emakiti.
Usatora kittens isingasviki mwedzi miviri: kubva panguva yavanoberekwa kusvika pavane mwedzi miviri yekuberekwa, vanofanirwa kuve naamai uye nevanin'ina vavo kuti vadzidze kuve uye kuzvibata sezvavari: katsi.
Kana iwe ukaona iyo yaunoda, usazeze kutaura iye mushambadzi. Izvi zvinofanirwa kuve zvine hushamwari, uye zvinofanirwa kupindura mibvunzo yese yaunayo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Noti katsi » Katsi » Kugamuchirwa » Maitiro ekurera katsi pamhepo
I want to adopt a kitten of no more than 2 months grey or yellow tabby, area of ​​caba Argentina brrio de saavedra .. kuitira kuti igadzikane zvirinani neanemakore manomwe eblack panther yandinayo, uye yakasara yega. . (yangu siamese yakasiyiwa kudenga-katsi ..) Kana iwe uchiziva nezve mumwe munhu padhuze ndiudzewo netsamba yekutenda
Kufenda mumakati, zvekuita?
Zvakanakira katsi kune vakwegura